We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကြီးတခု ကြုံရတော့မယ့်အနေအထားရောက်နေပြီဟု ဦးဝင်းတင်ဆွေးနွေး။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကြီးတခု ကြုံရတော့မယ့်အနေအထားရောက်နေပြီဟု ဦးဝင်းတင်ဆွေးနွေး။
ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများအဖွဲ့က ဦးထွေးမြင့်က RFA တယ်လီဖုန်း လိုင်းပေါ်ကတဆင့် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ရမယ်တော့ ဆိုပြီး ပျော်နေတယ်ပေါ့။ ခေါင်းစဉ်လေးကို အဲဒီလို ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးပေး သိလား
ကျမတို့ အစကတည်းကလည်း ပျော့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အမြဲပြောတယ်။ ကျမတို့ မပျော့ပြောင်းတဲ့နေရာက ဒူးခေါင်းပဲ ရှိတယ်။ ဒူးတော့ မထောက်ဘူး။ အခြားနေရာတွေ ကတော့ ပျော့ပြောင်းပါတယ်လို့ ကျမအမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ “ကျမ်းကျိန်လွှာကိစ္စက ပြည်သူတွေကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကျမတို့ရဲ့ကတိတွေကို ကျမတို့က ပြန်ပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့က အခုလုပ်နေတာတွေက ကျမတို့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက ကတိပေးခဲ့တာတွေနဲ့ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ အကောင်အထည်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ တမျိုးပြော၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါ တမျိုးပြော အဲဒီလိုမျိုး နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာ NLD မပါဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
One of our point of view,regarding the country situation.
The living standard of the cuntry is badly going down deeper and deeper with acceleration and momentum due to the 50 YEARS IMPACT of all the MISTAKES of WRONG POLITICAL SYSTEM and WRONG ECONOMIC SYTEM SET BY THE TEACHER,JUNTA,NAY WIN and STILL FOLLOWED UP BY HIS NEW GENERATION OF MILITARY GANGSTERS(totally without DEMOCRACY)
In other wards,the FIRE (which was started to ignite by NAY WIN in 1962)is still burning our country with great acceleration and momentum.
HE and his new generation of MILITARY GAGSTERS damaged not only the country but aso the GOOD MORAL OF ALL YOUNG MILITARY OFFICERS throughout the country.
ALL MILITARY OFFICERS and EMBASSY STAFFS MISS-USE UP the millions of COUNTRY MONEY.
ALL the "MORAL" HAS ALREADY DAMAGED,
which are NOT EASY TO WASH OUT to become "GOOD MORAL" during next 10 years
All their family and parters
-become richer and richer
-healthier and healtier
-live longer and longer.
But our country is gone already!
27 April 2012 at 03:27